बेरुत विष्फोटको एक सातापछि प्रधानमन्त्री दियाबे दिए राजीनामा – Himalaya Television
बेरुत विष्फोटको एक सातापछि प्रधानमन्त्री दियाबे दिए राजीनामा
२०७७ साउन २७ गते ७:५६
२७ साउन, २०७७, बेरुत । राजधानी बेरुतमा विष्फोट भएको एक सातापछि लेबनानका प्रधानमन्त्री हसन दियाबले राजीनामा दिएका छन्।
राष्ट्रिय टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दियाबले मन्त्रिपरिषद् भंग भएको घोषणा गरेका हुन्। यही अगस्ट ४ मा राजधानी बेरुतको तटीय क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको बिस्फोटक पदार्थ विस्फोटपछि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन बढ्दै गइरहेको थियो ।
नेताहरुको बेवास्ता र भ्रष्टाचारका कारण देशको अवस्था खराब बनेको तथा सोही कारण बिस्फोट भएको आरोप लाग्दै आएको थियो । शक्तिशाली विस्फोटमा २ सय २० को मृत्यु, १ सय १० जना बेपत्ता हुनुको साथै लाखौं मानिस घरबारविहीन भएका थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले सरकार भंग गर्नु अघि नै चार जना मन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरिसकेका थिए । राजीनामा दिएको सरकारलाई अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नहुँदासम्म कार्यवाहकको भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपति मिशेल एउनले आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बेरुत विष्फोट
सरकारी विकास र भूमाफियाको अतिक्रमणको चपेटा थारु समुदायको ग्रामथान (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ असोज ३ गते १७:०७
संविधानका बारेमा लुम्बिनी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री के भन्छन् ? (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ असोज ३ गते १६:५८
नागरिक भन्छन्– जनतालाई होइन, नेतालाई सर्वोच्च बनाउन रहेछ संविधान ? (भिडियो रिपोर्टसहित) २०७८ असोज ३ गते १६:४४
बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने २०७८ असोज ३ गते १६:३४
ओली सरकारविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई सरकारले दिएको पदक फिर्ता गर्न नेता नेम्बाङको आग्रह २०७८ असोज ३ गते १६:२३
गोरखामा स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्दै, २५ जनामा सङ्क्रमण २०७८ असोज ३ गते १६:१५
प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको छ : निर्देशक घिसिङ २०७८ असोज ३ गते १६:११